လက်မောင်းအဆီတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကျစေနိုင်တဲ့ (၃) မိနစ်စာ ကိရိယာလွတ် လေ့ကျင့်ခန်း
June 16, 2019 Cele Love 0
လက်မောင်းအဆီတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကျစေနိုင်တဲ့ (၃) မိနစ်စာ ကိရိယာလွတ် လေ့ကျင့်ခန်း အင်္ကျီလက်ပြတ်လေးတွေ၊ ပုခုံးအလှပေါ်တဲ့ အင်္ကျီလေးတွေ အရမ်းကြိုက်ပေမယ့် လက်မောင်းကြီးနေလို့၊ အဆီတွေများနေလို့ မဝတ်ရဲဖြစ်နေပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ စိတ်မညစ်နဲ့နော်။ ကိရိယာလည်းမလို၊ အချိန်လည်း အများကြီး ပေးစရာမလိုပဲ အိမ်မှာတင် (၃) မိနစ်လောက်လေး အချိန်ပေးလိုက်တာနဲ့ လှပကျစ်လျစ်တဲ့ […]
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ကို လိပ်ခန္ဓာ ကြက်တူရွေပါးစပ်၊ မိချောင်းအမြီး အင်္ဂါသုံးမျိုးပါ လိပ်တကောင်လာရောက်ဖူးမျှော် ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ကြီးကို လိပ်ခန္ဓာ ပါစပ်ကြက်တူရွေး မိချောင်းအမှီး အင်္ဂါသုံးမျိုးပါ လိပ် တစ်ကောင် လာရောက်ဖူးမျှော် . . .ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက လူကြီးတွေပြောလို့ ကြာပဲကြားဖူးခဲ့တာ မိုးတွင်းဘတ် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား တရိစ္ဆာန်တွေ ဘုရားတတ်ဖူးတယ်လို့ပြောဖူးခဲ့တာ့ အခုတော့ […]
အပျိုပေါက်မလေးတို့ ဗိုက်မကြီးပေမယ့် …ဗိုက်ကြီးတာထက် ဆိုးတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ ရှိသေးလို့ပါ အပျို​ပေါက်​ ညီမ​လေးတို့​ရေ ….. ဗိုက်​မကြီးသွား​ ပေမယ့်​ ဗိုက်​ကြီး သလိုပဲ ဆိုးရွားတဲ့ အ​ကြောင်း​လေး ဒီတစ်​ခါ အကိုက​​ ပြောပြချင်​တယ်​ ။ ချစ်​လို့ပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ ၊ အ​ပျော်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ အတူ​နေကြ ပြီးတဲ့​နောက်​ […]
ဘော်ဒီတောင့်တောင့်နဲ့ Sexy ကျတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသား အနုပညာရှင် (၅) ဦး… အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။ ဒီတခါမှာတော့ အားပေးသူ မိန်းကလေး ပရိသတ် အခိုင်အမာရရှိထားပြီး အရပ်မြင့်မြင့် ဘော်ဒီအမိုက်စားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသား အနုပညာရှင် (၅) ဦးကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် […]
အတိတ်မှာနာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရင် သူ့ကို လုံးဝလက်လွတ်မခံပါနဲ့…
အတိတ်မှာနာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရင် သူ့ကို လုံးဝလက်လွတ်မခံပါနဲ့… တကယ်လို့များရဲ့ အမျိုးသားပရိသတ်တွေထဲက တစ်ယောက်တလေများအတိတ်မှာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပရဗွနဲ့ကျရှုံးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုပတ်သက်ခွင့်ရနေမယ်ဆိုရင်၊ဒီထက်ပိုပြီးဝေးမသွားစေဖို့၊ပိုပြီးနီးစပ်အောင်ကြိုစားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အတိတ်မှာနာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့မိန်းကလေးဟာသင့်ရဲ့အချစ်စစ်အချစ်မှန်အတွက်အထိုက်တန်ဆုံးသောရွေးချယ်မှုဆိုတာကို အောက်ပါအချက်တွေက သက်သေပြပါလိမ့်မယ် နော် …. (၁) ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီးပြီ ” အတိတ်မှာ အချစ်ကြောင့်ခါးသီးတဲ့ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့မိန်းမပျိုဟာဘယ်လိုချစ်ရမလဲဆိုတာကိုသိသလို၊ဘယ်လိုကြောင့် နာကျင်မှုတွေ ရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း သင့်ကို သင်ပြပေးသွားမှာပါ။ သူမဟာ အချစ်မှာ အတွေ့အကြုံရှိခြင်း […]
ကျောင်းဆက်တက်ရန် အခက်ခဲရှိပြီး စားဝတ်နေရေး အတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့ ၄ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်မိန်းကလေး
ကျောင်းဆက်တက်ရန် အခက်ခဲရှိပြီး စားဝတ်နေရေး အတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့ ၄ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်မိန်းကလေး ရေကြည်မြို့နယ် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် လေးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ကျောင်းသူတစ်ဦး ကျောင်းဆက်တက်နိုင်ရေး အကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ် …။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရေကြည်မြို့နယ် ကက္ကူလေး အုပ်စု ကုလားကုန်းကျေးရွာမှ ဦးအထွန်းလေး၏သမီး မခိုင်သဇင်ထွန်းသည်၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ကုန်းပြင် စာစစ်ဌာနတွင် […]
အ်ိမ်ရှင်မတွေအတွက် လုံးဝတန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ထမင်းချက်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေသိထားသင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်… နေ့စဉ်စားသုံးမှုမှာ အဓိက အစားအစာတမျိုးဖြစ်တဲ့ ထမင်းချက်ပြုတ်တာဟာ အပေါ်ယံအားဖြင့်တော့ လွယ်ကူတယ်လို့ ထင်ရပါတယ် …။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ထမင်းဖြစ်ဖို့အတွက် အိမ်ရှင်မတွေကို အခုဖော်ပြပေးမယ့် အချက်တွေက အကူအညီပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် ….. (၁) ရာသီဥတု အပူရှိန်ကြောင့် […]
အချစ်စစ်နဲ့ပဲ သန့်သန့်လေးချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အပြုအမူများ
အချစ်စစ်နဲ့ပဲ သန့်သန့်လေးချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အပြုအမူများ အခုလိုခေတ်မျိုးမှာ အချစ်စစ်ဆိုတာ အရမ်းရှားသွားပါပြီ။ တဏှာကိစ္စတွေမပါဘဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အပေါ်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်တတ်တဲ့ယောကျာ်းတွေရှားသွားပြီလို့ ပြောရင်လည်း မလွန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မရှိဘူးလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေမှာ ဒီလိုအပြုအမူတွေရှိပါတာဖြစ်ပါတယ် …. ။ ၁။ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင် အတွဲခုံမှာ မထိုင်တတ်ဘူး စုံတွဲခုံမှာထိုင်တိုင်း တဏှာစိတ်ပါနေကြတယ်လို့တော့ […]